June 2020 - Latest Myanmar News
မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် ပြန်ဖွင့်ပြီ
June 30, 2020 by Latest Myanmar News
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကို ဇူလိုင် ၁ ရက် စတင်ပြီး ကိုဗစ်ကာလ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် ဂေါပက အဖွဲ့ထံက သိရပါတယ်။ “လာတဲ့ ဘုရားဖူးကို တောင်ကလပ်စောင်းတန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပတ္တမြားစောင်းတန်းနဲ့ ဆင်နှစ်ကောင် စောင်းတန်းမှာ ဝန်ထမ်းတွေချထားမယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ အပူချိန်တိုင်းမယ်။ Mask တပ်ဖို့ စစ်ဆေးမယ်။ လာတဲ့နေရပ်ဒေသ၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ တက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့် ပြုသွားမယ်” လို့ တောင်ကလပ် ဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးမြင့်က ပြောပါတယ်။ လူအင်အားကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချအသုံးပြုထားသလို မျောက်တွေအတွက် အစာရောင်းချသူ တွေကို တစ်နေ့ ၁၂ ဦးရောင်းချခွင့်ပြုထားရာက တစ်ရက် ၆ ဦးသာ ရောင်းချရန် နှင့် … Read more
သူငယ်ချင်းကောင်းဟု ဆိုထိုက်သူ (၄)မျိုး
ပေါင်းဖော်အပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း ( ၄ ) မျိုး ၁ ။ ကူညီတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း သင် ထိခိုက် ၊ နာကျင် နေချိန်မှာ ကာကွယ်ပေးတယ် ။သင် ကြောက်နေချိန်မှာ လုံခြုံ ၊ နွေးထွေးမှု ပေးတယ် ။ သင် ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုး နဲ့ ကြုံနေချိန်ဖြစ်ပါစေ ၊ ငါ ပြန်ရဖို့မမျှော်ကိုးပဲ အမြဲအကူအညီပေး တတ်တယ် ။ ၂ ။ မြဲမြံတဲ့သူငယ်ချင်း သင့် လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ကို ၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လျို့ဝှက်ချက်တွေ လိုပဲ လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်း ပေးတယ် ။ သင် ဆင်းရဲ ၊ ဒုက္ခ နဲ့ ကြုံနေချိန်မှာလည်း … Read more
လတ်တလော ဖြေရှင်းနိုင်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ
ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ သင်မသိသေးတာတွေ တအံ့တဩ သိစေရမယ် ၁ ) – သင့်လည်ချောင်းထဲမှာ ယားနေတယ်ဆိုရင် …. နားရွက် ကို ကုတ်လိုက်ပါ နားရွက်မှာ. ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကို လူံဆော်မိတဲ့ အခါအဲဒီ အာရုံကြောတွေဟာ လည်ချောင်းထဲက အာရုံကြောတွေကို အလိုအလျှောက်တုန့်ပြန်စေပြီး ယားယံမူ ကို ပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။ ၂ ) – လူတွေ ဆူညံ့နေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တယောက်ယောက်ရဲ့အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေလား.. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ညာဖက်နား ကို အသုံးပြုပါ ဂီတ သံစဉ်တွေ ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နား ကို အသုံးပြုပါ။ ၃ ) – … Read more
ရာသီစာ ကြက်သဟင်းရွက်၏ ဆေးဖက်ဝင်အစွမ်း
ကြက်သဟင်းပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်မှု ကြက်သဟင်းပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်မှုများကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေသော လက်တွေ့ အသုံးချဆေးဖက်ဝင်အပင်များပေါင်းချုပ် စာအုပ်၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ပုံသဏ္ဍာန် ပင်မတ် ချုံပင်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။၁-၇ ပေအထိမြင့်သည်။အရွက်မှာ ရွက်လွှဲထွက်သည်။အရွက်မှာ ငှက်မွှေးရွက်ပေါင်း ဖြစ်သည်။အပွင့်မှာ သေးငယ်သည်။အရောင်မှာ လိမ္မော်ရောင်။ရိုးတံကပ်ပြီး အပွင့်ပွင့်သည်။အသီးမှာ ညှာတံမဲ့သည်။ ပေါက်ရောက်ပုံ စားသုံးပင်အဖြစ် နေအိမ်ခြံဝင်း များတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ မရှော့ရွက်ပင်နှင့် မျိုးရင်းတူသောကြောင့် အပင်ပုံသဏ္ဍာန်လည်း ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းမှာ အရွက်၊ အမြစ်။ အာနိသင် အရွက်မှာ အေး၏။ချိုသော အရသာရှိ၏။လေလမ်းကို ဖြောင့်၍ ၀မ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ ပိုးနား၊ အဆိပ်နာကို နိုင်၏။ကိုယ်ပူနာနှင့် သင့်၏။အသည်းရောဂါများနှင့် အထူးသင့်လျော်၏။ အသုံးပြုပုံ ကြက်သဟင်းရွက်အား ဟင်းချိုချက်၍ လည်းကောင်း၊ ကြော်ချက်စားခြင်းအတို့အမြှုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း ဟင်းလျာများတွင် … Read more
အမည်ပြောင်း၊နေရပ်ပြောင်းအတွက် ၊နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ဆောင်ရွက်မှု ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုတော့
ယာဉ်ပိုင်ရှင်များခရီးလွန်ယာဉ်စစ်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရေးအတွက် ခရီးလွန်ယာဉ်စစ် သည့်ရုံးများမှ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မစစ်တော့တဲ့အတွက် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ အဆင်ပြေကြောင်း သိရှိရ၍ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ယခုအမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေး မဖြစ်စေဖို့၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်လာဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ပြေလည်စေဖို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရုံးတွေလည်း လုပ်ငန်းမြန်ဆန်ဖို့ရည်စူးပြီး အမည်ပြောင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆောင်ရွက် ခြင်းကို ဖြေလျှော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊။ ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းအခွန်မှာ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူ ပြီးကြောင်း အခွန်ပုံစံမှာ အမည်ပေါက်ပေးဆောင်သူရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊အိမ်ထောင်စုလူဉီးရေ စာရင်း(ပုံစံ-၁၀)မူရင်း၊အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ပြည်တွင်းအခွန်မှာယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အခွန်စည်းကြပ်မှု ခံယူပြီးကြောင်း အခွန်ပုံစံနဲ့ လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်သူရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း တင်ပြပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မလာရောက်စေတော့ဘဲ အမည်ပြောင်းမှုကို ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်နေ့စပြီး ရုံးများအားလုံး ဆောင်ရွက်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များဟာ အမည်ပြောင်းလဲဖို့ ပြည်တွင်းအခွန်များဉီးစီးဌာနမှာ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကျသင့်တဲ့ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် … Read more
ရင်ဘတ်အောင့် ၊ အတွင်နာ ရှိလျှင် တောဆီးဖြူ
အတွင်းဒဏ်လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ တောဇီးဖြူပင်(ခေါ်)တောင်ဇီးဖြူ ဒီအပင်ကို တောဇီးဖြူပင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခြားအခေါ်အဝေါ်လည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်။ မည်သို့ပင် ခေါ်စေကာမူ လက်တွေ့လုပ်သူကိုယ်တိုင်က အပင်ကိုကိုင်ပြပြီး ပြောပြနေတာဖြစ်လို့ ယုံမှားမှု မရှိ်ကြပါနဲ့။ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ထိုင်းကို အလုပ်သွားလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အလေးတွေကို မ,ရ ပင့်ရတော့ ‘အတွင်းဒဏ်ဖြစ်နိုင်တယ် ဖြစ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူသောက်ရအောင်’လို့ တွေးပြီး ရောဂါမဖြစ်သေးသော်လည်း သူသိထားတဲ့အတိုင်း တောဇီးဖြူပင်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ကျိုချက်ပြီး ပုလင်းတွေထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အလုပ်ရုံမှာ အလေးတွေကို မ,ပင့်နေရလို့ ရင်ဘတ်အောင့်နေတာ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ပိုပြီးအောင့်လာ နာလာတဲ့အခါ အိမ်မှာပြန်နားတော့မယ်လို့ ပြောပြတော့ ပုလင်းထဲသိမ်းထားတဲ့ဆေးကို အလုပ်ရုံမှာဘဲ သောက်ခိုင်းပြီး သက်သာလာလို့ ရက်အနည်းငယ်မှာပင် ရင်ဘတ်အောင့်တာ လုံးဝပျောက်ကင်းပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်နီးပါးလောက် ရောဂါထပ်မဖြစ်တော့တာကို တွေ့ရပြီးနောက် မိတ်ဆွေက မြန်မာပြည်ကို … Read more
Grade-10 နှင့် Grade-11 ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ခက်ခဲနေသဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာ ဖိတ်ခေါ်နေသော စာသင်ကျောင်းလေး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း လစာ တစ်လ-၃၅၀၀၀၀(သုံးသိန်းငါးသောင်း) ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါတယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ဆဘောင်းပီကျေးရွာ၊ အ‌ခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း တွင် လက်ရှိအထက်တန်းပြ ဆရာတစ်ဦးတည်းသာရှိနေပါသဖြင့် အထက်တန်းဆင့် Grade-10 နှင့် Grade-11 ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ထိုအခက်အခဲဖြေလျှော့နိုင်ရေးအတွက် ရပ်ရွာမိဘပြည်သူများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆဘောင်းပီ သားများမိသားစု ( Global Sabawngpisawzy Koinonia) အဖွဲ့မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငှားရမ်းလိုသည့်အတွက် (1) Math (2) Chemistry (3). Physic (4). Bio ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်သည့် ဆရာဆရာမများ အလိုရှိနေပါသည်။ လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဉာဏ်ပူဇော်ခ အဖြစ် တစ်လလျှင် လစာ 300000/- ကျပ် (သုံးသိန်း) ညစာကျက်ဝိုင်းကြီးကြပ်ခ =50000/- (ငါးသောင်းကျပ်) … Read more
ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါအတွက်ဆေးတစ်ခွက် ဆေးတစ်ဖုံတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ငရုတ်ကောင်း ၄ စေ့ လေးညှင်းပွင့် ၄ ပွင့်် ကြက်သွန်ဖြူဥ ၂ စိတ် Kiss me ရွက် ၂ ရွက် ငရုတ်ကောင်းစေ့၊ လေးညှင်းပွင့်၊ ကြက်သွန်ဖြူဥ သုံးမျိုးကိုရောထောင်းပါ Kiss me ရွက်ကို ရေဆေးထားပါ ထောင်းထားသည့် ငရုတ်ကောင်းစေ့၊ လေးညှင်းပွင့် နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို ရေဆေးထားသော Kiss me ရွက်နှင့်ရောပြီးစားပါ။ ထို့်နောက် ဓါတ်ဆားရည် သောက်ပေးပါ။ ဆေးသောက်ပြီး ၅ မိနစ်လောက်နေလျှင် ရေချိုးပေးပါ။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုသက်သာစေပါသည်။ကာလကြာရှည်သော ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပါက တစ်နေ့တစ်ခါ တစ်လ သောက်ပေးပါက သက်သာစေပါသည်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ ZeeHeebal Unicode ဝမျးလြှောဝမျးပကျြရောဂါအတှကျဆေးတဈခှကျ ဆေးတဈဖုံတှငျပါဝငျသောပစ်စညျးမြား ငရုတျကောငျး ၄ စေ့ လေးညှငျးပှငျ့ … Read more
ထိုင်းနိုင်ငံက ထူးဆန်းတဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် ချဲဂဏန်း ၃ လုံး ၊ ၂ လုံး ကိုအထင်အရှားပေးသည်ဟုဆိုကာ လူအများလာရောက်ပူဇော်ပသကြပြန်ပြီ ဇွန်လ ၃၀ ရက် အခုတလောထိုင်းမှာ အထူးအဆန်းဆိုရင် ချဲဂဏန်းတောင်းကြတဲ့ပို့စ်အတော်များများကိုမြင်တွေ့နေရတယ် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်း အူဒွန်ထာနီ ( Udonthani ) ခရိုင် ဖိန်မြို့ နယ် ( Phen ) ၊ ဘန့်ထတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ နားဖွန်ဆတ်ကျေးရွာအနီး အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ် နိုင်ဒီး ရဲ့လ်ာကွင်းစပ်မှာပေါက်နေတဲ့ သက်တမ်းနှစ် ၁၀၀ နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ ညောင်ပင်အောက်မှနောက်ထပ်ညောင်ပင်ရဲ့အရွက်အားလုံးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကတည်းက ရွှေရောင်လိုဝင်းပနေပြီး အရောင် ၄ မျိုးပြောင်းသည်ဟု အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် နန်းထန်ချနုတ် မှဆိုပါတယ် ။ … Read more
June 29, 2020 by Latest Myanmar News
ခြင်ကိုက်ဖုတွေကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်း (၄) မျိုး ခြင်ကိုက်ဖုတွေရဲ့ခံစားချက်ဟာ တော်တော်လေးကို ဆိုးရွားပါတယ်။ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ယားဖုတွေမဟုတ်ပေမယ့်လို့ ယားတဲ့ဒဏ်ကိုက ဆိုးရွားလွန်းနေတာပါ။ တချို့ဆိုရင် ခြင်ကိုက်ဖုတွေကြောင့် အနာတွေတောင်ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါဆို ခြင်ကိုက်ဖုတွေကို အမြန်ဆုံးသက်သာအောင် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသကြမလဲဆိုတာ Insider မှ ကိုးကားဖော်ပြထားတာမလို့ ကြည့်လိုက်ကြပါစို့ ပျားရည် သဘာဝကိုက ပိုးသတ်စေတဲ့အစွမ်းရှိနေတဲ့ ပျားရည်ကို ခြင်ကိုက်ဖုတွေမှာ သုံးပေးခြင်းဖြင့် အနာကျက်စေပြီး ယားယံမှုတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ အအေး ခြင်ကိုက်ဖုတွေသက်သာအောင် ရေခဲအုံပေးလို့ရပါတယ်။ ရေခဲမရှိလည်း ရေခဲသေတ္တာထဲ ထားထားပြီး တော်တော်လေးအေးနေတဲ့ အအေးဗူးလိုမျိုးနဲ့လည်း ဖိကပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက် ဖိကပ်ပေးရုံနဲ့ အအေးးဟာ နီရဲယောင်ယမ်းမှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ရေနဲ့မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ရောပြီးရလာတဲ့ အနှစ်ကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ယားယံမှုတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် … Read more
Categories အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး
တရားနှင့် ဂါထာတော်များ (109)